Google Adwords, Adsense နှင့် Google Maps? | Martech Zone
Google Adwords, Adsense နှင့် Google Maps?
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 8, 2007 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2017 Douglas Karr
ငါပါတီပွဲသို့နောက်ကျလာမည်ဖြစ်သော်လည်းသင်သိပြီးဖြစ်သော်လည်းသင်၏ Google Adwords သည်ဂူဂဲလ်မြေပုံများနှင့်အလုပ်လုပ်နေမှန်းကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။ ငါစမ်းသပ်နေတဲ့ site တစ်ခုရှိသည်။ နောက်ခံတွင်သင်၏ IP လိပ်စာ (သင်၏ကွန်ရက်လိပ်စာ) ကိုလတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်ကိုဖြေရှင်းပေးသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုရှိသည်။ ပြီးတော့မြေပုံရဲ့အလယ်ကိုပြသဖို့အဲဒီလတ္တီတွဒ်နဲ့လောင်ဂျီတွဒ်ကိုသုံးတယ်။
NO ရှိတယ်၊ ငါ NO ထပ်ခါတလဲလဲ, အက်ပလီကေးရှင်းရှိပထဝီအနေအထားကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကတည်းကဖော်ပြခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ဂူးဂဲလ်သည်မြေပုံတည်နေရာမှကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရမည်။
တော်တော်လေး slick! Adsense ကြော်ငြာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်၎င်းတို့သည်ဗဟိုလတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ် (သို့မဟုတ်မြေပုံပုံရိပ်များ၏အတုံးများ) ကိုအသုံးပြုရမည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% အထင်ကြီးလေးစားခြင်းခံရပြီး (နှင့်ဤ site ကိုမကြာမီဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်!) သငျသညျ Google ယောက်ျားတွေ (နှင့် gals) အချို့သော smart dudes များနှင့် dudettes ဖြစ်ကြသည်။
Tags: google AdSenseAdWords အ googleမြေပုံ google
၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်သူတို့၏ visitors ည့်သည်အရေအတွက်ကိုဘယ်လောက်အထိအလွန်အကျွံဖော်ပြသလဲ။